အဖွင့်စာမျက်နှာ | Myanmar Journalism Institute
October 28, 2017 အဖွင့်စာမျက်နှာRicky Soe
မြန်မာပြည်မှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းဆောင်းပါး (ရသသရုပ်ဖော်သတင်း)၊ in-depth
သတင်း၊ ရေဒီယိုပရိုဂရမ်၊ ရုပ်သံပရိုဂရမ်တွေ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ Climate Change သတင်းဆုပေးပွဲ ကို
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံနဲ့ UN-HABITAT တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ သတင်းစာဆရာ
မည်သူမဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်သူဟာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့ သတင်း ၂ ပုဒ်ကို
ရွေးချယ်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းတွေဟာလည်း ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးသား သို့မဟုတ်
အသံလွှင့်ပြီးသား သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်သူဟာ
ကိုယ်တိုင်ရေးသားထုတ်လုပ်ထားပြီးတဲ့ သတင်းတွေရဲ့ ပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးသားသတင်းစာ၊ ဂျာနယ် သို့မဟုတ်
ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုဆိုရင်လည်း မည်သည့်နေ့ရက် အချိန်တွေမှာ ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထောက်အထားနဲ့
တင်ပြရပါမယ်။ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်သတင်းတွေကို နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှသည် နိုဝင်ဘာ ၁၅
MJI အနေနဲ့ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုတွေကို ရွေးချယ်သွားပြီး ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးမြှင့်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
– သတင်း Topic နဲ့ Angle ဆီလျော်ကိုက်ညီမှု
ထားရှိမှု – သတင်းတည်ဆောက်ပုံ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် သတင်းကောင်းတွေကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။
By-Election Reporting Training, organized by MJI and supported by FHI360, starts on 20th March, 2017 at My Hotel Myanmar. 18 participants who represents different media houses from Yangon Division, Mon State, Chin State, Shan State, Kachin State, Taninthari Division and Magwe Division, attend the training. The training will take place from 28th March to 1st April (By-Election Day).
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ စီစဉ်ပြီး FHI360 မှ အထောက်အပံ့ပေးသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းရေးသားနည်း သင်တန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်း ဗားဂရာလမ်းမပေါ်ရှိ My Hotel Myanmar တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ တွင် တည်ရှိသော မတူညီသည့် သတင်းမီဒီယာတိုက် အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသည့် သတင်းထောက်များက တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းသင်တန်းသားဦးရေ ၁၈ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ သင်တန်းကို မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
March 29, 2017 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
ဂျပန်နိုင်ငံ ရှိ မတူညီသော သတင်းစာပညာကျောင်းအသီးသီး မှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ယနေ့မနက် ၁၀ နာရီ က မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ သို့ လာရောက်လည် ပတ်ခဲ့ပြီး အချိန်ပြည့်သတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ နှင့် အတူ ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ အပြန်အလှန် အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ ၏ အချိန်ပြည့်သတင်းစာညာဒီပလိုမာ သင်တန်းသားများမှာ ယခု အချိန်တွင် Mobile ဖုန်းဖြင့် ရုပ်သံသတင်းပြုလုပ်နည်း ကို သင်ကြားနေခြင်း ဖြစ်ပြီး သင်တန်းလက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်းအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ရုပ်သံအင်တာဗျူး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ Journalism students from different Universities in Japan, visits MJI on 29 March, 2017 at 10 am. The Japanese students meet with MJI’s Full-time Diploma in Journalism students and made interview with each other. MJI’s Full-time Diploma in Journalism students are now studying Mobile video Journalism and they interview the Japanese students as their practical exercises. (Some photos are taken by Chris Peken.)
March 28, 2017 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
Among the most exciting journalistic developments, Thiha Saw told me, is investigative reporting, which was difficult if not impossible before 2012. If it was done inside the country, it involved great risks, pen names, and smuggled footage, similar to efforts today in North Korea. “There were attempts to come up with these investigative reports [in the past], but they were killed under censorship,” he says. “Young people are now ready and willing to go after these kinds of stories.”
Sein Win,atraining director at the school, worked in India and Thailand for Mizzima,aMyanmar media outlet that operated outside the country during the military junta, before returning in 2012. “When I started journalism, it was not about journalism. To be honest, I used journalism asatool, sort of an information campaign to overthrow the military regime,” he tells me. “But for the youth, they have the opportunity to go straight to the professionalism. I believe this is very positive for the country. That’s why guys like Ko Swe Win can do the investigative stories,” he added, usingaformal prefix for Burmese male names.
The curriculum includes classes on basic news writing, video, audio, media law, photojournalism, digital media, and feature writing, as well as key coverage areas such as the environment and an upcoming class on gender issues. MJI has partnered with news outlets for internships, and makes trainees head out into the field to report an in-depth story as part of what it calls “summer school.” Sein Win says most students who graduated in the first class in 2015 now have jobs.
He recognizes there are obstacles. “What I don’t like in the current situation is that journalists are overwhelmed by the self-censorship, avoiding sensitive issues,” he says. “But still, we need to investigate, we need to write about that. Luckily, people like Swe Win, they didagreat thing,” he adds, saying he was inspired by the reporting. “When I read the story, I wanted to go back to the newsroom.”
Myanmar Journalism Institute was mentioned in Columbia Journalism Review.
October 18, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (MJI)၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ မှ Canal France International (CFI) နှင့် World Wildlife Fund
Myanmar (WWF မြန်မာ) တို့ ပူးပေါင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သတင်းရေးသားနည်း သင်တန်းကို ရန်ကုန်၊
မန္တလေး နှင့် ထားဝယ် မြို့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတစ်ခုလျှင် ငါးရက်ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မှ သင်တန်းဆရာများက သင်ကြားပြသပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒေသအလိုက် သင်ကြားသွားမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ –
Mandalay – Business Sustainability ( November 14 – 18)
Dawei – Bio Diversity ( November 21 – 25)
Yangon – Energy ( November7– 11 (or) November 28 – December 2) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားမည့်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
– သတ်မှတ်ထားသော သင်တန်းရက်များအား အစမှ အဆုံးတိုင် တက်ရောက်နိုင်ရမည်။
– သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာများကို မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ ၏ Website နှင့် Facebook Page များတွင် Download ရယူနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ info@mjimyanmar.org သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီအထိ နောက်ဆုံးထားပြီး လက်ခံပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထားဝယ်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သော သင်တန်းအတွက် ထားဝယ်မြို့ ပြင်ပမှ လာရောက်မည့် သင်တန်းသားများအတွက် ခရီးစရိတ် နှင့် နေထိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထပ်မံသိရှိလိုသော အချက်အလက်များ ရှိပါက ဦးစိုးဇော်မော် ၊ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ၊ ဖုန်း ၀၉ ၇၈၆ ၂၃၂ ၄၀၀ (သို့) communications@mjimyanmar.org သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာ Download ရယူရန်
#မြန်မာဖောင့်မပေါ်ပါက လျှောက်လွှာပေါ်တွင် Click ထောက် Control A ဖြင့် select လုပ်ပြီး Font အား Zawgyi
ဟု ပြောင်းလဲ ရွေးချယ်ပါရန်#
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးဖေမြင့် MJI သို့ လာရောက်လည်ပတ်
October 11, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဦးဖေမြင့် သည် ၃.၁၀.၂၀၁၆ ခုနှစ် တနင်္လာနေ့ နေ့လည် ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်မြိ့ စမ်းချောင်းမြို့နယ် မဟာမြိုင်လမ်းရှိ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံရုံး သို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် Digital Journalism သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြွရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဦးဖေမြင့် သည် အချိန်ပြည့် သတင်းစာပညာဒီပလိုမာသင်တန်း သင်ကြားနေမှုများအား သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီ ခွဲ အချိန်ခန့်တွင် မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။
Dr. Pe Myint, Union Minister, Ministry of Information paidavisit to Myanmar Journalism Institute around 10:30 am on 3rd October, 2016 in order to discuss on the development of MJI and to discuss about organizing Digital Journalism Trainings. After the discussion, the Union Minister Dr. Pe Myint visited the full-time diploma in Journalism training room and left MJI at 12:30 Pm.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိမ်း မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ သို့လာရောက်လည်ပတ်
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်၊ သောကြာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နော်ပန်းသဉ္ဖာမျိုး၊ လျှပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်၊ ဂျာမန်သံအမတ်ကြီး Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch နှင့် ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး Mr.Olivier Richard တို့ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ သို့ အလည်အပတ်အဖြစ် လာရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နှင့် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီဝင်ဟောင်း ဦးဇော်သက်ထွေး နှင့် မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးသီဟစော တို့ နှင့်တွေ့ဆုံကာ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် European Union(EU) မှ ကူညီထောက်ပံ့မည့် ကိစ္စရပ်များ ကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှုများ ပြီးဆုံးသွားသည့်နောက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က အချိန်ပြည့်ဒီပလိုမာ သင်တန်းသားများ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။
H.E U Phyoe Min Thein,The Chief Minister of Yangon Region, H.E Naw Pan Thinzar Myo, Minister of Karen Ethnic Affairs, H.E Daw Nilar Kyaw, Minister of Electricity, Communication and Transportation Ministry, H.E Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch, Ambassador of German Embassy and H.E Mr.Olivier Richard, Ambassador of French Embassy paidavisit to MyanmarJournalism Institute on September 23rd, 2016. Then, the Chief Minister satameeting with U Zaw Thet Htwe from Myanmar Journalist Union and U Thiha Saw, Executive Director of MJI to discuss about giving support from the Yangon Region Government and European Union(EU) for the development of MJI. After the meeting, the Chief Minister met with MJI’s Full-time Diploma Students and left at 11am.
September 27, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph